The Ab Presents Nepal » विद्यालयमा अब छोटो र कसिलो लुगा लगाउन प्रतिबन्ध ड्रेस कुर्ता सलवार,ठिक कि बेठिक ?
विद्यालयमा अब छोटो र कसिलो लुगा लगाउन प्रतिबन्ध ड्रेस कुर्ता सलवार,ठिक कि बेठिक ?
काठमाडौ धेरै सुनिँदै आएको छ, छात्रामाथि शि’क्षकले गरे यौ’न दु’व्र्यवहार, छात्रद्वारा छा’त्रामाथि दु’व्र्यवहार आदि इत्यादि । तर धनकुटाको एउटा विद्यालयले छा’त्रामाथि हुने यौ’न हिं’साका घ’टना न’होस् भन्ने उ’द्देश्यले सबै कक्षाका छा’त्रामाथि कु’र्ता–सलवारको अनिवार्य व्य’वस्था गरेको छ ।
धनकुटा–२, भीरगाउँमा रहेको श्री टङ्क माविमा यस्तो व्यवस्था भएको हो ।
नर्सरीदेखि कक्षा–१ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको विद्यालयमा कक्षा–१ देखि १० सम्मका छात्रालाई यस्तो व्य’वस्था गरेको हो । ‘यसअघि छात्राका लागि सर्ट र फ्रक व्यवस्था हुँदै आएको थियो प्रधानाध्यापक नरबहादुर विश्वकर्मा भ’न्छन्, ‘फ्रक त जति छोट्याएपनि हुने, कसैले धेरै छोटो पारेर पनि लगाएको देखियो । यसले सबैमा मनोवैज्ञानिक असर देखियो ।
विद्यालयमा अध्ययनरत् छात्राहरूले नै अशोभनीय किसिमले विद्यालय पोशाकलाई दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेकोले सबै छात्राका लागि कुर्ता–सलवार लगाउन आग्रह गरेको सहायक प्रधानाध्यापक पुष्कर गुरागाईं बताउँछन् । ‘अब विद्यालय आउँदा मर्यादित नखेदिने पोशाक नलगाउन भनेका छौं’, उनले थपे, ‘त्यही भएर स्कुल आउने अधिकांश छात्रा कुर्ता–सलवारमा आउँछन् ।
छात्राले कसिलो र छोटो कपडा लगाउन थालेपछि टिनएजर्स छात्र तथा शिक्षकहरूमै मनोवैज्ञानिक असर पर्ने आफूहरूले बुझेको प्रधानाध्यापक विश्वकर्मा बताउँछन् । पाँच सय भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा यस्तो नियम लगाएपछि अभिभावक पनि खुशी बनेको उनको कथन छ । सबै अभिभावक पनि ठीक गर्नु भयो भन्दै राम्रो स’न्देश दिनतर्फ लागेका छन्
उनले दा’वी गरे,यस्तो अभियान धनकुटामै पहिलो हो ।’ उनले कुर्ता–सलवार लगाउँदा खर्चको पनि बचत हुने हुनाले आर्थिक अ’वस्था क’मजोर भएका अभिभा’वकका लागि झनै स’हज बनेको बताए । हा’वाहु’री र वर्षाको समयमा पनि लगाउन सहज हुने, सजिलै ल’गाउन सकिने हुनाले पनि यस्तो नि’यम लगाइएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा ११ र १२ मा शिक्षा सङ्कायमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ ।